XK-18/23 / 25S atrikasa fampiroboroboana ny indostrialy dia ny cooler indostrialy malaza indrindra. Namboarinay tamin'ny hery samihafa 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw hihaonana amin'ny fangatahana samihafa. Ary misy miakatra, midina, rivotra mivoaka mba hapetraka mora amin'ny rindrina, tafo sy toerana hafa. Azo ampiharina t ...
Ny hatevin'ny rivotra mangatsiaka 12cm vaovao dia mangatsiaka kokoa XK-18/23 / ST
Ny rivotra mangatsiaka indostrialy miaraka amin'ny pad mangatsiaka 12cm dia fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina amin'ny XIKOO amin'ny taona 2020. Ny famolavolana tsindrona manokana sy ny patanty modely ho an'ny tenany sy ny patanty fisehoantsika. Izy io dia misy ny fivoahana, ny fivoahana ary ny fivoahan'ny lafiny, afaka mifanaraka amin'ny fangatahana fametrahana toerana. Ny ...
XK-20S moana indostrialy centrifugal rano mangatsiaka rivotra mangatsiatsiaka cooler no indostrialy malaza indrindra cooler sentrifugal. Ary misy fiakaran'ny rivotra miakatra, midina, mankamin'ny rindrina, tafo ary toerana hafa azo apetraka amin'ny toerany. Azo ampangatsiahana ny zavamaniry 60-80m2 amin'ny faritra mando ary 150-200m2 ny zavamaniry ao ...
rivotra lehibe indostrialy mikoriana mangatsiaka rivotra mpankafy XK-30S
XK-30S onjam-pandehan'ny rivotra mangatsiaka indostrialy dia mpangataka mangatsiaka malaza indrindra. Izy io dia herin'ny 3kw ambany miaraka amin'ny onjam-peo 30000m3 / h lehibe, ary ny famoahana ny rivotra 40-50m amin'ny tsipika fantsona. Azo ampiharina amin'ny faritra mangatsiaka 200-250m2 miaraka amina singa iray. XK-30S onjam-pivoarana lehibe amin'ny alàlan'ny rivotra iainana indostrialy ...